ကျွန်ုပ်သည် terminal terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများမှာ "roguelike" | Linux မှ
ကျွန်ုပ်သည် terminal terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများမှာ "roguelike"
Linux သုံးစွဲသူများသည် terminal ကိုအလွန်အမင်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၊ လူအများစုမသိသောဂိမ်းအမျိုးအစားများဖြစ်သော Rogue ဆင်တူသောဂိမ်းများ (သို့မဟုတ်roguelike ဂိမ်းများကို«) ။ Rogue ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် ထောင်ထဲနှင့်နဂါးစတိုင် (ဟုတ်တယ်၊ မာရ်နတ်လို) ဒါပဲ terminal ကိုလုံးလုံးအခြေခံသည်, မည်သည့်ဂရပ်ဖစ်မရှိဘဲနှင့်အဘယ်သို့သောအရာတကယ်အရေးပါသည် သမိုင်း နှင့် ကစားသမားစိတ်ကူး.
Rogueငါပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ဒါက ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့မြေအောက်ခန်းနှင့်နဂါးငွေ့တန်းစတိုင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်း roguelikes (lit. rogue ကဲ့သို့) ဟုရည်ညွှန်းသောမျိုးဆက်သစ်ဂိမ်းများကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ ဒီအမျိုးအစားထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးဂိမ်းအချို့ Hack, NetHack, Larn, Moria, ADOM နှင့် Angband ။
အကောင်းဆုံး roguelikes အပေါ်အလေးပေးအများကြီးနေရာ သမိုင်း။ အခြေခံအားဖြင့်တော့သူတို့ကငါတို့ကို“ ဖမ်း” ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်လို့ပဲ။ ငါအချို့သည်သူတို့၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုငါအာမခံ၏ အလွန်စွဲလမ်း သင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းမွန်စွာကစားရန်သင်ယူတစ်ချိန်က။ ဒီဂိမ်းအမျိုးအစားများရဲ့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုကသူတို့ဟာဘယ်တော့မှအတူတူမဖြစ်တာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါကးယခုအချိန်တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်ထိန်းသိမ်းထားကြသည်သမိုင်း၏အချို့သောလိုင်းများရှိပါတယ်ပေမယ့်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်ဒုတိယအခွင့်အလမ်းကိုမပေးနိုင်ပါ။ ဤနေရာတွင် "ဘဝ" ဟူသောအယူအဆမရှိပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုသတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင် ထပ်မံ၍ စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကဘယ်လောက်ပဲနိမ့်ကျနေပါစေသင်ချမှတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းကိုမှန်ကန်စေသည်။
3 Angband & Zangband
7 Nethack အနကျအဓိပ်ပါယျ
Rogue ကို Linux အတွက် download လုပ်ပါ
Nethack ကို Install လုပ်ပါ
Angband & Zangband
Angband ကို Install လုပ်ပါ Zangband ကို Install လုပ်ပါ
တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် - http://www.dungeoncrawl.org/
ဝီကီပီးဒီးယား (အင်္ဂလိပ်) http://en.wikipedia.org/wiki/Linley’s_Dungeon_Crawl
Crawl ကို Install လုပ်ပါ
ဝီကီပီးဒီးယား (အင်္ဂလိပ်) http://en.wikipedia.org/wiki/ADOM
Linux အတွက် ADOM ကို download လုပ်ပါ
Roguelikes အချို့၏ "ဂရပ်ဖစ်" ဗားရှင်း ...
Nazghul ကို Install လုပ်ပါ
Crossfire ထည့်သွင်းပါ Install GlHack Nethack Qt ကို Install လုပ်ပါ
roguelike ဂိမ်းများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကလည်ပတ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည် မင်္ဂလာပါ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » ကျွန်ုပ်သည် terminal terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများမှာ "roguelike"
ဤဂိမ်းများသည်ပရိုဂရမ်ရေးရန်ခက်ခဲစရာမလိုသော်လည်း 'ဖန်တီးရန်' ခက်ခဲသည်။ မခက်ခဲလွန်းလျှင်သင်လုပ်ရန်သင်ခန်းစာအနည်းငယ်ပေးနိုင်သည်။
ကောင်းတဲ့အကြံပါပဲ ပြနာမှာ၎င်းသည်အကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်၍ များစွာသောပို့စ်များကိုယူပြီး၎င်းသည်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်ထိုက်တန်သည်မသေချာသည်။ ဆိုလိုတာကတော့လူအများစုကစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိဘူး။ 🙁မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ဤဂိမ်းတစ်ခုအားမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုသိရန်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားပါ၊ ရင်းမြစ်ကုဒ်နှင့်အတင်းအဖျင်းကိုကူးယူပါ။ 🙂၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အားသာချက်များဖြစ်သည်။
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာကိုအချိန်တိုအတွင်းသိခဲ့သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ငန်းအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါသည်။
geek ရော gamer မပါ၊ ငါ terminal ထဲမှာအခြေခံများကိုလုပ်ရုံသက်သက်သာမဟုတ်ပေမယ့်ငါ post ကိုတကယ်သဘောကျတယ်။
na great … .. နောက်တစ်နေ့ bethack ကို install လုပ်ဖို့အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါမသိဘူး။ ငါသူတို့ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ မင်းဘာတွေထည့်သွင်းဖို့လိုလဲသိလား အရာ mmorpg ဖြစ်ကြသည်။
ဤရွေ့ကားဂိမ်းများကိုအံ့သြဖွယ်, စူပါပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်။ ငါဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ပေမယ့်ငါ will ဖြစ်လိမ့်မယ်
Nethack သည်အခက်ခဲဆုံးနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဂိမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ dwarf fortress သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအလွန်ခက်ခဲသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည် ။( nethack ကိုပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းဖြစ်စေသောအရာအချို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ဥပမာ၊ ရန်သူဖြစ်သည့် Basilisk (ဒဏ္myာရီအရမျက်လုံးချင်းဆုံသောအခါသတ်ဖြတ်တတ်သောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ သင့်ကိုထိလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုကျောက်တုံးအဖြစ်သို့) ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းတွင်သုတ်ပဝါတစ်ခုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ လက်သုတ်ပုဝါနှင့်လုပ်နိုင်သောအရာသည်သင်၏ခေါင်းကိုမျက်မမြင်အဖြစ်ထားရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုသင့်အားမမြင်တွေ့စေပါ၊ သို့သော်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းသည်သင့်အား basilisk ဆန့်ကျင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
သငျသညျလက်အိတ်သို့မဟုတ်လက်နက်မပါဘဲ basilisk ဝင်ရန်ကြိုးစားလျှင်, ရုံထိရုံကထိမိလျှင်, သင်ကျောက်သို့လှည့်ပါ!
သင် basilisk အနိုင်ယူပြီးတာနဲ့သင်ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်လည်နိုင်ပါတယ်! (လက်အိတ်များကိုဝတ်ဆင်ရမည်။ ထို basilisk ၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း အခြားအရာများအပြင်၎င်းကိုလက်နက်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏ရန်သူတို့ကိုလည်းကျောက်ခဲနှင့်ပစ်မည်
ပြီးတော့ဒီဂိမ်းဟာဒီအမျိုးအစားနဲ့ပြည့်နေတယ်။ မျက်နှာကြက်ကနေပစ္စည်းတွေကျသွားတယ်။ မင်းမှာခမောက်မရှိဘူးဆိုရင်မင်းဒုက္ခရောက်နေတယ်။
ဤဂိမ်းအမျိုးအစားများစုဆောင်းခြင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းပြီးနောက်ထပ်များစွာရှိပါသည်။ Angband သည် Tolkien ၏စာအုပ်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
FC Kundo ဟုသူကပြောသည်
ဒီအမျိုးအစားမှာနှစ်အနည်းငယ်အထိ ROGUELIKE ဆိုတဲ့နာမည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး
PC RPG ပရိသတ်များအတွက်စတင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
DREDMOR ၏ DUNGEONS
ငါ THOME, DUNGEON CRAWL STONE SOUP, ROGUE SURVIVOR, DOOM RL နှင့်အတူဆက်ပြောသည်။
၎င်းတို့အားလုံးသည်သင်အားရှုပ်ထွေးသော roguelikes များနှင့် ACII interface ရှိသူများနှင့်အပြည့်အဝရနိုင်စေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂိမ်းများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤလမ်းကြောင်းများကိုလေ့လာရန်အားမပေးသော်လည်း NETHACK နှင့် ADOM မှထွက်ခွာ။ မရပါဟုဝန်ခံပါသည်
အလွန်ကောင်းသော post ကိုနှင့်အကြံပြုချက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
telnet နှင့်အခြားအရာများမှတစ်ဆင့်ဤအရာများကိုမည်သည့်အချိန်၌ကစားပါသနည်း၊ ယခုအချိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမျှ၊ ဂရပ်ဖစ်များစွာနှင့် chicha နည်းနည်း (^_^)
CLI ကိုမြှင့်တင်ရန်ဤကဲ့သို့သော post များသည်မကြာခဏလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်း xD နှင့်စာသားအတိုင်းကစားကြောင်းပြသသည်
ငါဒီဂိမ်းတွေကိုသဘောကျတယ်၊ တကယ်တော့ငါကပရိုဂရမ်းမင်းတစ်ခုကိုစမယ်။ နောက်ဆုံးကျွန်တော် C ++ မှာလုပ်ခဲ့တယ်။ Win / DOS အတွက်စုစည်းပြီးတော့ UNIX / Linux အတွက်စုစည်းထားတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ncurses ကို OS ပေါ် မူတည်၍ pdcurses ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။
ငါလုပ်နေတာ။ ဒါပေမယ့် 16-bit style ဂရပ်ဖစ်ကိုကြည့်ပြီးသူရဲကောင်း ၂၀၀ လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရှုနိုင်ပြီးကစားသူဘက်ကလည်းသူတို့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။
စစ်တမ်း - မျှော်လင့်ထားသည့် Linux စီမံကိန်းကဘာလဲ။